Xafiiska Caafimaadka DDSI Oo La Soo Wareegay Gaadiid Cusub. - Cakaara News
Xafiiska Caafimaadka DDSI Oo La Soo Wareegay Gaadiid Cusub.
Addis abab, (CN) isniin, 1da February, 2016, Sidaad wararka yagii hore kula socoteen waxaa kulan ka dhacay wasaarada arimaha fadaraalka ee JDFI ay wasarada caafimaadka JDFI ku wareejisay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar gaadiid loogu talagalay in lagu xoojiyo dhinaca adeegyada caafimaadka ee dawlada deegaanka somalida itoobiya gaadiidkaasi oo kala ahaa 72 baabuur oo ah TOYOTAHILUX iyo160 motorcycles.
Haddaba si loo soo gaadhsiiyo deegaanka islamarkaan ay u qabataan hawlihii shaqo ee loogu talagalay ayaa waxay wasarada caafimaadka JDFI ku soo wareejisay gaadiidkan qaybtii ugu horaysay masuuliyiin ka socday xafiiska caafimaadka DDSI oo uu ka mid yahay Gadhwadeenka Geedi socodka maamulka lacagaha, hantida iyo adeeg’bixinta ee xafiiska caafimaadka DDSI mudane Ibraahin Axmed. Kaasi oo ka warbixiyay ahmiyada balaadhan ee uu gaadiidkani u leeyahay kor u qaadida iyo sii xoojinta adeegyada caafimaadka.
Wuxuuna sheegay gadhwadeenku in gaadiidkan lagu xoojidoono adeegyada cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka taasi oo qaybtan ugu horaysay mihiimada la siiyay cisbitaalada si looga midha dhaliyo dhimida dhimashada hooyada iyo dhalaanka taasi oo ka mid ah qorshaha GPT2 ee ku saabsan dhinaca adeegyada caafimaadka ee dawlada deegaanka soomalida itoobiya iyo ta JDFI